Kitra any Eoropa – «Ligue des champions» : efa any amin’ny manasa-dalana ny tongotry ny Real | NewsMada
Kitra any Eoropa – «Ligue des champions» : efa any amin’ny manasa-dalana ny tongotry ny Real
Par Taratra sur 05/04/2018
Tsy mbola afa-bela, tamin’ny Real de Madrid indray ny Juventus de Turin, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “ligue des champions”, taranja baolina kitra. Resin’izy ireo, tao amin’ny kianja filalaovany ny Italianina.
Nampandohalihan’i Cristiano Ronaldo, tao amin’ny kianja filalaovany ary nanoloana ny mpijery azy, ny Juventus de Turin, ny talata lasa teo, nandritra ny lalao mandroso hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “ligue des champions”, taranja baolina kitra. Resin-dry zalahy, tamin’ny isa mazava, 3 no ho 0, mantsy ny Italianina. Ny baolina roa tafiditr’i CR7 avokoa ary ny iray sanganasan’i Marcello.
Saro-toerana tanteraka ny Juventus, satria mbola any Madrid ny fihaonana miverina. Efa any amin’ny manasa-dalana kosa ny tongotra ilan’ny Real. Tsy mbola afa-bela, amin’ny Espaniola indray izany ny Italianina, tamin’ity.
Anisan’ny nampitolagaga sy nampitsangana ireo mpijery marobe, tao amin’ny kianja Juventus Stadium, ilay baolina faharoa tafiditr’i Ronaldo, tamin’ny alalan’ny “ciseau acrobatique”. Na i Zidane, mpanazatra aza niaiky fa tena fahaizana sy talenta manokana mihitsy iny vitan’i Ronaldo iny. Samy nidera iny zava-bitany iny ihany koa ireo mpanao gazety rehetra, tany Eoropa.
Marihina fa tsy afaka milalao i Paulo Dybala, ho an’ny Juventus, amin’ny fihaonana miverina noho ny karatra mena azony, teo amin’ny minitra faha-66.
Ankoatra izay, nivoaka ho mpandresy tany an-tanin’ny mpifanandrina taminy ihany koa ny Bayern de Munich, rehefa nandavo ny Séville, tamin’ny isa tery, 2 no ho 1. Lalao notanterahina, tao amin’ny kianja Sanchez Pizjuan.